मोफसल यात्रामा ‘सानो मन’ – osnepal tv
चलचित्र ‘सानो मन’ यूनिट यति बेला चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मोफसल यात्रामा छ । २७ असारबाट मुलुक भरका सिनेमा हलहरुमा प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको यूनिटले शूक्रबार चितवनका पत्रकारबीच अन्तक्रिया गरेको छ ।
नायिका शिल्पा मास्के, कलाकार सक्षमकृष्ण सुवेदी र निर्माता राजेन्द्र मानन्धरले सानो मनको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । नायिका मास्केले यस चलचित्रमा आफुले निकै मेहनत गरेको र चलचित्र दर्शकलाई मन पर्ने जिकिर गरिन् । पत्रकार भेटघाटमा नायिका शिल्पा मास्के आफु लण्डन बसेर विदेशी फिल्ममा समेत काम गरेको अनुभव सुनाउँदै नेपालमा नै केहि गर्छु भनेर नेपाल आएर नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेको जानकारी गराईन् । कथा वस्तु प्रभावशाली लागेर आफुले ‘सानो मन’मा काम गरेको र आफ्नो तर्फा बाट सकेको काम गरेको बताउदै अब दर्शक चलचित्र हेरेर मुल्यांकन गर्ने उनले बताईन् ।
Previous article मौसमले साथ नदिएपछि बाजुरामा ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न
Next article सावधान! कान पाके हुन्छ दिमागसम्म असर
मौसमले साथ नदिएपछि बाजुरामा ३० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न
सावधान! कान पाके हुन्छ दिमागसम्म असर